दिनेश लामा संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को सभापतिमा निर्विरोध निर्बाचित होलान् ? – मिलिजुली खबर
काभ्रेमा दुई वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा भोली नेपाली काँग्रेसको अधिवेशन हुदैँछ ।
अधिवेशन सुरु हुने केहि घण्टा अघिसम्म पनि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा मधु आचार्य प्यालनले सभापति सहित पदाधिकारीको उम्मेदवार घोषणा नगर्दा कयौँ प्रतिनिधि अन्योलमा परेका छन् । धेरैले शिव प्यानलबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका दिनेश लामा सर्बसम्मत सभापतिमा निर्वाचित भइसकेको हो ? भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् ।
तर मधु प्यानल अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा नगरपनि दर्ता भने गर्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । उम्मेदवार दर्ता नगरेपनि यस अघि ४ गते सकिएको संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (क) मा जस्तै केहि पद लिने र सभापति भने शिव हुमागाई प्यानललाई नै मधु समूहले छोडेले धेरै ले अनुमान गरेका छन् ।
जेहोस् अहिलेसम्म मधु आचार्य समूहको तर्फबाट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सभापति सहित पदाधिकारी उम्मेदवार घोषणा नहुनुलाई केहि कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरु आश्चार्यचकित बनेका छन् । केहि भने उक्त क्षेत्रमा मधु समूह निकै कमजोर भएकाले अगाडी नै उम्मेदवार घोषणा गर्दा अझ बढी नोक्सान ब्यहोर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा शिव प्यानलबाट सभापतिमा दिनेश लामाको टोली घोषणा गरिएको छ । शिव प्यानलबाट सचिबमा किशोर गिरी र विद्या सागर लामा, सहसचिबमा पदम बहादुर लामा र गणेश अधिकारी रहनुभएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ शिव प्यानलबाट सभापतिमा सुन्दरमणी आचार्य र मधु प्यानलबाट महेश खरेल भिड्दैछन् । शिव प्यानलबाट सचिबमा राम जोशी र आनन्द सापकोटाको उम्मेदवारी परेको छ ।
१० गते जिल्ला सभापतिका लागि अधिवेशन हुने छ । जिल्ला सभापतिमा मधु आचार्य प्यानलले अहिलेसम्म जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न सकेको छैन् । शिव प्यानलले भने तीर्थ लामालाई सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर प्रचारप्रसारलाई तीब्रता दिइरहेको छ । अधिवेशनमा २५ सय ४३ प्रतिनिधि सहभागि हुनेछन् ।